WOWOW IFaucet yeKhitshi yoMphathi omnye ngokuTsalela Phantsi i-spray Chrome-IiFaucets zeKhitshi eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Thatha iipompu zekhitshi / WOWOW Isiphatho esinye seKhaphetshe yasekhitshini ngeTsala i-Chrome ye-Spray
I-WOWOW Isiphatho esinye seKhitshi yeKhitshi yokuHamba ngeTsala ezantsi lokutshiza iChannel
Le tap yeekhitshi ilungele ukusetyenziswa kwezicelo zekhaya kunye nezasekhaya.
Le mpompo yekhitshi esemgangathweni idiliza inezinga eliphakamileyo lokubhengeza ubuhle.
Ukukhupha i-tapt uyakwazi ukubonelela ngokhuseleko kunye nokuhombisa.
2310700C Imiyalelo yokufaka
Ikhitshi yokuxuba ikhitshi i-chrome 2310700C
Impompo yokuxube ekhitshini idibanisa nje amanzi ashushu nabandayo. Ungayixube ngqo le mijelo mibini ngokuchanekileyo ngokweemfuno zakho. Ukuze ubonelele ngokuchanekileyo kubushushu bamanzi obufunayo. Ukuxuba ubushushu bamanzi kungenziwa ngesandla-kunye nekhitshi yokuxuba ikhitshi chCH yeWOWOW. I-lever isebenza nje kakuhle kwaye namanzi anokulawulwa ngokulula. Zombini iqondo lokushisa kunye noxinzelelo lwamanzi ngokwalo. Uya kuqaphela kwangoko ukuba le lever yenziwe ngezinto ezisemgangathweni. Njengoko iqhuba kakuhle, kwaye ingenangxaki yakubuyela umva, uyazi ukuba uqinisekisiwe ngonyamezelo lobomi obude.
Ungasebenzisa imisebenzi emithathu yamanzi ngelixa uxuba ubushushu bamanzi. Kwi-spout ungayikhetha indlela yokuhamba, imo yokutshiza, kunye nemo ye-aqua-blade. Indlela ye-aqua-blade ibonelela ngejet yamanzi enamandla, ekhupha konke ukungcola kwiimbiza zakho kunye neepani kwangoko. Le ndlela ye-aqua-blade yindlela eyahlukileyo ongeke udibane nayo kwiimpompo ezininzi zomxube wekhitshi. Imo yokutshiza yindlela esebenzayo yokucoca i-pllatter-free, kwaye imo yokuhamba rhoqo yeyona ndlela ilungileyo yokugcwalisa iimbiza ngamanzi umzekelo. Zonke iindlela zamanzi zibonelela ngomsebenzi wokonga amanzi ukuze uqoqosho lube nokusetyenziswa kwamanzi. Ngale ndlela uya kufaka isandla kwinxalenye yakho ukonga kwizinto zendalo ezinqabileyo. Ngaphandle koko, uyakuqaphela oku kwityala lakho lamanzi, njengoko unokugcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 ekusebenziseni kwamanzi kunye nomxube wetrophini yokuxutywa kwekhitshi yeWOWOW.
Umgangatho ophezulu ekhitshini oxubanisa itephu chrome
I-Wowow inikezelwe ukubonelela abathengi abakumgangatho ophezulu. Kungenxa yoko le nto iWOWOW isebenzisa izixhobo ezigqitha kuzo zonke iindlela zeshishini, kwanezo zeempawu ze-A. Ku-WOWOW sikholelwa ukuba ngomgangatho ophezulu ungawenza umahluko kwimarike. Nje ukuba umntu abe namava empompi yokuxuba yeWOWOW, uya kuba ngumthengi ubomi bonke. Yiyo loo nto sibona isiseko sethu sabathengi sikhula mihla le. Ungakubona ukugqwesa kwethu kwizicelo zethu eziphucukileyo, njenge-Neoperl aerator kunye nokugqitywa kweefayile ngeenkqubo zokuphakama kumphezulu womhlaba. Siyaqinisekisa ukuba ungazisebenzisa iimpompo zethu eziphezulu zokusebenza ekhishini ixesha elide.
Kungenxa yeso sizathu ke apho eWOWOW singoyikiyo ukukunika ixesha lesiqinisekiso seminyaka emi-5 kwishishini lokuxuba ikhitshi. Uninzi lweebhegi zetephu zinika nje ixesha lewaranti eyi-1. Oku kusebenza nakwiimpawu ze-A ezininzi. Njengomxube wephedi ekhitshini oqhelekileyo uhlala iminyaka emi-5 ukuya kweli-10, eWOWOW sinethemba lokukunika ixesha lesiqinisekiso seminyaka emihlanu. Iya kuba yinto engaqhelekanga kakhulu ukuba isipompo somxube wasekhitshini sinokutshintsha endaweni yeminyaka emi-5 emva kokuyifaka. Kwaye siya kufumanisa ukuba nayo ayisebenzi, ngakumbi ngokwembono yabaxumi bethu. Kutheni uza kujongana neziphumo zoku? Kungenxa yoko le nto sinokutshintsha indawo yokuxuba yasekhitshini ukuba ayizukuqhuba kakuhle ngaphakathi kweminyaka emi-5. Ngaphandle kweengxaki!
Tsala phantsi umpompo wokuxuba
Ukusebenza okutsala amehlo komxube wompompi wasekhitshini kukutshiza okuphantsi. Ungadonsa ngokulula intloko yesitshizi yesi sixhobo somxube wekhitshi kunye negiza elide lokubonakala liya kubonakala. Ngale hose yamanzi unokufikelela nakweyiphi na indawo okanye ejikeleze ikhitshi lakho ekhitshini.
Le hose yamanzi yayenziwe nge-silika eguquguqukayo yesilika, ke ngoko uqinisekiswa ngokusebenza ngokulula njengoko ikhupha ngokulula. Kwaye emva kokuyisebenzisa, iya kurhoxa ngokuzenzekelayo ngenxa yebhola e-ravity efakwe ngokungabonakaliyo kwikhitshi lakho le-sinkboard.Ihose yamanzi nayo yenziwe ngezinto ezisemgangathweni. Ngale ndlela awunyanzelekanga ukuba unxunguphele ngokunxiba, ukuntywila okanye ukuvuza. Le kliphu yokuxuba ikhitshi yokuphela kwegumbi elinye iya kuhlala ininzi, iminyaka emininzi. Esi sisiqinisekiso esifuna ukukunika sona.
Ukusetyenziswa kworhwebo ukuxuba ikhitshi ukuxutywa kwitshini
Ngenxa yodidi oluphezulu esilunikeza kunye nomxube wephedi yokupheka yitshini, ikhomputha yokuxuba ikhitshi isetyenziswa rhoqo kwiindawo zentengiso. Kwiindawo zokutyela kunye nemivalo ephezulu yokusebenza kwezixhobo zasekhitshini kubalulekile ekusebenzeni kwayo. Ukuba itephu yokuxuba yasekhitshini ingaphuma, ingonakalisa ishishini ngokwalo. Ke, iindawo zentengiso ezinjengeendawo zokudlela zinokuxhomekeka kuphela kwizixhobo ezikumgangatho ophezulu. Kungenxa yale nto, eWOWOW sikufumanisa kunomvuzo ukuqaphela ukuba iindawo ezininzi zokutyela eziphumezileyo zisebenzise iitephu zethu zomxube wekhitshi. Isiqinisekiso sesithembiso esemgangathweni esikunikezelayo.
Iphedi yokuxuba ikhitshi ekhitshini
Ngaphandle komgangatho kunye nokusebenza, kumakhaya kunye neeresity, ekhitshini yokuxuba ikhitshi inika inqanaba eliphezulu lokubhengeza ubuhle. Kwindawo yokuqala ngenxa yoyilo lwayo oluphezulu oludibanisa isitayile kunye nokusebenza, njengoko usenokufikelela ngokulula kwisinki ekhitshini. Abaqulunqi be-WOWOW banikezelwe ukubonelela ngemifanekiso enesibindi eya kulunga kuyo nayiphi na ikhitshi yoyilo. Kungenxa yoko umxube we tapkin ekhitshini weWOWOW ngokuqinisekileyo awufani nezinye iimpompo zomxube. Isiseko sokuxutywa kwekhitshi ekhitshini sinqabile phezulu kwaye sibanzi emazantsi. Umgca ojikelezayo wesinqeni walesi sixhobo somxube wekhitshi unobuhle ngakumbi kwaye unika ikhitshi yakho ubuhle. Kwaye xa ujikelezisa impompo yokuxuba, uyilo aluyi kuphulukana nobukhali bayo nakanye.
Lilonke, umxube oxutywe nekhitshi we-chOW ye-WOWOW ikunika elona xabiso liphezulu lemali onokuyifumana kwintengiso. Kwaye ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ufumana isiqwenga kunye nenhle yezixhobo zasekhitshini eziya kutsala nayiphi na ingqalelo ekhitshini lakho, nokuba kusekhaya okanye kurhwebo. Umxube wempompo wekhitshi weza ekhitshini uza newaranti yeminyaka emi-5 kunye nokubuya kwemali kwiintsuku ezingama-90. Ukuba awungekhe weyiseke ngumxube ongumxube wompompi wetshini, uvunyelwe ukubuyisela kuthi ngaphandle kwemibuzo ebuzwe. Uya kufumana imbuyekezo epheleleyo kwangoko. Siyathemba kwiimveliso zethu kwaye siyathemba ukuba uya kuyithanda ikhomputha yethu yokuxuba ikhitshi kunye.
Izibonelelo zomsebenzi oxubayo ekhitshini uthepha ngechrome ngendlela engezantsi:
Inika i-wow-factor kuyo nayiphi na ikhitshi
Iimpawu zokuxuba ezigqwesileyo
Iindlela ezintathu zamanzi
Indawo yokonga amanzi
Uyilo oluhle kwaye luhle
Kulula ukucoca kwaye kulula ukuyigcina
Iwaranti yonyaka we-5
I-SKU: 2310700C iindidi: Thatha iipompu zekhitshi, IFaucets yasekhitshini tags: Umxube weKinki Sink, ISpivel Spout
21.65 x 11.02 x 2.76 intshi
Ikhompiyutha yasekhitshini / itanki lokuntywila elitshini kunye nokutshiza isitshizi
Umngxunya oMnye kunye neeHole ezi-3; I-Deck-Mount
IArc ephezulu / iGooseneck
I-1-Hole okanye i-3-Hole ene-8 intshi ye-Deck Plate Covering
Iindlela ezintathu: Ukusasaza / ukutshiza / ukunqumama
Impompo yokuxuba / imisebenzi emithathu yolawulo lwamanzi
I-1x WOWOW Ikhompiyutha yasekhitshini (i-50cm eshushu kunye neMibhobho yaManzi aBandayo, i-1.5m yoXinzelelo oluPhezulu lwePeople Resistant PEX), Izixhobo: Irabha, iGasket, iNut, i-1x yomsebenzisi, 1x Ubunzima, i-1x 8 intshi ye-Deck Plate
WOWOW phezulu Arc High Singatha eyodwa ibrashi ...
WOWOW Matte Black ekhitshini uMxube weTaps